Thit Htoo Lwin: 6/19/11 - 6/26/11
19/05/13 - 26/05/13 (115)
ချစ်၍ခေါ်ရာ>>>နေမျိုးအောင်၊ တင့်တင့်ထွန်း၊ ဖူးစုံ
6/29/2011 05:48:00 PM
99.9>>>ရန်အောင်၊ ရဲအောင်၊ ဖြိုးငွေစိုး၊ ဂျေမီ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
6/29/2011 05:45:00 PM
မင်းသမီ ဆိုတာ လောကဓံ ကို ကြံ့ကြံ့ ခံရဆုံး လူသားတွေ ပါ၊ စိုးမြတ်သူဇာ က အိမ်ထောင် လုံးဝ မပြု ပါ ဟု ဆို
ပရိသတ်တွေကြား ထဲမှာ စိုးမြတ်သူဇာ အိမ်ထောင်ပြု တော့မယ်ဆိုတဲ့ ကောလာဟလ သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့လို့နေပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ
6/29/2011 05:38:00 PM
ကချင်ပြည်နယ်တွင် တည်ငြိမ်​အေး​ချမ်း​မှု ကင်း​မဲ့​Published on June 29, 2011 by ဒီဗွီဘီ · No Comments
မြို့​တော် မြစ်ကြီး​နား​မြို့​မှာ ညမထွက်ရ အမိန့်​မထုတ်ထား​သော်လည်း​ဒေသခံလူထုတို့​မှာ ည​ရေး​ညတာ အပြင်ထွက်ဖို့​ခက်​နေပြီး​ညစဉ်ဖမ်း​ဆီး​မှု​တွေလည်း​ရှိ​နေလို့​ဒေသခံလူထုတို့​မှာ စိုး​ရိမ်ထိတ်လန့်​နေကြပါတယ်။
6/29/2011 05:15:00 PM
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နယ်သို့ ခရီးထွက်ရန် တလပင် မလိုတော့ချိန်၌ အစိုးရက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် တရားဝင် ရပ်တည်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသိပေးမှု သစ်ထူးလွင်
6/29/2011 05:11:00 PM
FILE - In this Nov. 13, 2010 file photo, Myanmar's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi talks to the supporters as she stands at the gate of her home in Yangon, Myanmar. Myanmar's pro-democracy leader Aung
San Suu Kyi on Tuesday, June 28, 2011 delivered the BBC's annual Reith Lecture, speaking to an international radio audience via recordings smuggled out of the country.
(AP Photo/Khin Maung Win, File)
LONDON—Myanmar's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi has deliveredaprestigious annual BBC radio lecture, telling an international audience that her compatriots are envious of people in Tunisia and Egypt, where long-serving dictators have been toppled.
On recordings smuggled out of Myanmar, also known as
6/28/2011 07:06:00 PM
နတ်သမီးလေးရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ>>>စွမ်း၊ မို့မို့မြင့်အောင်၊ မေသက်ခိုင်
6/28/2011 05:52:00 PM
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်များကိုသာ ခန့်
Published on June 28, 2011 by ရွှေအောင် · No Comments
သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေရာ သုံးဆယ်ကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ နီးစပ်သူတွေကိုချည်း ခန့်လိုက်ပါတယ်။
6/28/2011 05:40:00 PM
မြန်မာအစိုး​ရကို ပံ့​ပိုး​နေသည့်​ပုဂ္ဂိုလ် ၄၀ ကျော်ကို အ​ရေး​ယူဒဏ်ခတ်ရန် ကြိုး​ပမ်း​Published on June 28, 2011 by ဒီဗွီဘီ · No Comments
ရကို စီး​ပွား​ရေး​နဲ့​နိုင်ငံ​ရေး​အရ ကျော​ထောက်​နောက်ခံပြု​နေတဲ့​အ​ပေါင်း​အ​ဖော် ၄၂ ဦး​ကို ဘဏ္ဍာ​ရေး​အရ ပစ်မှတ်ထား​ဒဏ်ခတ်အ​ရေး​ယူဖို့​ဝါရှင် တန်အ​ခြေစိုက် မြန်မာ့​အ​ရေး​လှုပ်ရှား​မှုအဖွဲ့​USCB က အ​မေရိကန် ဘဏ္ဍာ​ရေး​ဝန်ကြီး​တီမိုသီဂိုက်သနာ
6/28/2011 05:38:00 PM
Myanmar deports 'blacklisted' Michelle Yeoh
(AFP) YANGON — Hollywood star Michelle Yeoh, who plays pro-democracy champion Aung San Suu Kyi in an upcoming film, has been deported by army-dominated Myanmar and blacklisted, an official said Tuesday.
6/28/2011 05:23:00 PM
မီရှဲလ်ယိုး မြန်မာပြည် ၀င်ခွင့်မရတော့
ရန်ပိုင်- ဧရာဝတီ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် ကမ္ဘာကျော် ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မီရှဲလ်ယိုးကို အာဏာပိုင်များက နာမည်ပျက်စာရင်း သွင်း၍ ပြည်ဝင်ခွင့် ငြင်းပယ် လိုက်သည့်အတွက် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ လှည့်ပြန်သွားရကြောင်း
6/28/2011 05:19:00 PM
နှလုံးသားလဲလှယ်ပွဲ>>>ကျော်ရဲအောင်၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ခင်လေးနွယ်၊ စိုးပြည့်သဇင်
6/28/2011 12:15:00 PM
မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ် Vol.3, No.21, Wednesday, June-29, 2011
6/28/2011 12:07:00 PM
Weekly Eleven News Journal Vol(6) No(39)
6/28/2011 12:02:00 PM
6/28/2011 09:37:00 AM
ဒေါ်စုပြောတဲ့ လူငယ်နှင့် အိုင်တီ
အင်တာဗျူး > Rebecca Henschke | တနင်္လာနေ့၊ ဇွန်လ ၂၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၀၈ မိနစ် ရန်ကုန်) Asia Calling မှ Rebecca Henschke နှင့် KBR 68H အင်ဒိုနီးရှား
ရေဒီယိုသတင်းဌါန၏ အပတ်စဉ် ရေဒီယိုအစီအစဉ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်သော တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် မြန်မာလူငယ်များ အကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အိုင်တီနည်းပညာ ပြောင်းလဲမှုကြီးကို သတိထားမိကြောင်းလည်း ဒေါ်စုက ထည့်သွင်း
မွေးနေ့မှာ ဘာတွေလုပ်နေပါသလဲ။ “ကျမမွေးနေ့မှာ
6/28/2011 08:30:00 AM
James Mackay ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓါတ်ပုံ PX3 ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆု ဆွတ်ခူး
ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေ ဦးစီးပြီး နှစ်စဉ် ကျင်းပတဲ့ PX3 နိုင်ငံတကာ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာ ဒီနှစ်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ James Mackay
ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေ ဦးစီးပြီး နှစ်စဉ် ကျင်းပသော PX3 နိုင်ငံတကာ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ရရှိခဲ့သည့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား သစ်ထူးလွင်
6/28/2011 06:32:00 AM
လာမည့် ပညာသင်နှစ်မှစတင်ကာ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ် စတင်လျှောက်ထားမည့်သူတိုင်း လေးနှစ်တက်ရောက်မှသာ ဘွဲ့ရတော့မည်
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်အား တွေ့ရစဉ်
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်၌ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ကာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၌ အဆင့်မြင့်ပညာ ပထမနှစ် စတင်တက်ရောက်ကြရမည့် သူများအနေဖြင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်သို့ ရွေးချယ် တက်ရောက်မည်ဆိုပါက စာသင်နှစ် လေးနှစ် တက်ရောက်မှသာ ဘွဲ့ရရှိတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သစ်ထူးလွင်
6/27/2011 05:47:00 PM
တရုတ်နှင့် မြန်မာကျောက်ကုန်သည်များ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျောက်ဝိုင်းတွင် တနင်္လာနေ့နံနက်က တရုတ်ကုန်သည်များနှင့်
မန္တလေးဒေသခံ ကုန်သည် အကြား အချင်းများကာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ပြီးနောက် ကျောက်ဝိုင်းကို ပိတ်ပစ်လိုက်သည်။
ဈေးဖြတ်ထားပြီးသည့် ကျောက်တလုံးကို သစ်ထူးလွင်
6/27/2011 05:07:00 PM
ရွှေဂတ်စ် မစင်ကိစ္စ ကျေးရွာသား ၆၅ ဦးက ရခိုင် ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်သို့ တိုင်ကြား
ရွှေဂတ်စ်စီမံကိန်းမှ အလုပ်သမားများ စွန့်ထုတ်ပစ်သော မစင် မိလ္လာများကို ကျေးရွာအနီးချောင်းတွင် ကားဖြင့် လာသွန်နေသဖြင့် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အုန်းတော အုပ်စု ၀က်ဆံ ကျေးရွာမှ ကျေးရွာ
လူကြီး ၆၅ ဦးက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ထံ စာရေးတိုင်ကြားလိုက်ကြောင်း
6/27/2011 10:12:00 AM
4th of July ဘောလုံးဒိုင်း KYU အသင်း ဗိုလ်စွဲ
ဗိုလ်စွဲသွားတဲ့ KYU အသင်း ဆုယူနေပုံ
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်ပြည်နယ် အော်ဘာနီမြို့မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ
လွတ်လပ်နေ့အကြို ဘောလုံးပွဲကိုဇွန်လ 24 ရက်နေ့ 26 ရက်နေ့အထိ
ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အော်ဘာနီ၊ ယူတီကာ၊ဆာရာကျူ့  ၊ဗန်မောက် နဲ့
ဟက်ဖို့ဒ် မြို့ တွေက မြန်မာတွေ အားလုံးပေါင်း (၁၁) သင်း ပါဝင်
ကစားခဲ့ကြတာပါ။ ဒီကနေ့ မှာတော့ နောက်ဆုံး ဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက်လာတဲ့ ယူတီကာမြို့က KYU အသင်းနဲ့ OTC အသင်း ယှဉ်ပြိုင် ကစားရာမှာ KYU အသင်းက အနိုင် ကစားပြီး ဒိုင်းဆု ရယူသွားပါတယ်။ အခုလို ဘောလုံးပွဲတွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံ
သားများအသင်းက စီစဉ် ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနှစ် ဘောလုံးပွဲ ကိုတော့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အဖွဲ့(အော်ဘာနီမြို့) ရဲ့ ပံပိုး ကူညီ
6/27/2011 09:27:00 AM
ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့ရှိ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဌာနချုပ် သင်တန်းကျောင်းတွင် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ (Photo: RFA)
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ အကြား တင်းမာမှု မရှိတော့ဘဲ အခြေအနေတွေ နဂိုအနေအထား နီးပါး တည်ငြိမ်မှု ရရှိနေပြီဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းရဲ့ ပြောဆိုချက် မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း KIO က ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့ရှိ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဌာနချုပ် သင်တန်းကျောင်းတွင် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေပုံ ဖြစ်ပါသည်။ သူရဦးရွှေမန်းဟာ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ သစ်ထူးလွင်
6/27/2011 05:30:00 AM
6/26/2011 08:32:00 PM
ပုံပြောကောင်းတဲ့ ကောင်းမလေး>>>ဟ်ိန်းဝေယံ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
စစ်တပ်ကြောင့် တိုင်းပြည်ပျက်ရပုံကို ချစ်ဦးညို ဝေဖန် ပြီ
6/26/2011 07:58:00 PM
The Voice Weekly No.7/ Vol.27
မူစယ် ဗုံးကွဲအပြီး ကချင်ရပ်ကွက်များ စစ်ဆေးမှု ပိုလုပ်လာ
မန္တလေးဈေးချို မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲပုံ
ယခုလ ၁၈ ရက် ည ၉ နာရီခန့်က သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူစယ်မြို့ရှိ အရာရှိတည်းခိုရိပ်သာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲအပြီး မူစယ် ခရိုင် အတွင်း ရှိကချင်ကျေးရွာ နှင့်ရပ်ကွက်များ ဧည့်စာရင်းစစ်ဆေးမှု ပိုလုပ်လာ ကြောင်း သိရသည်။
6/26/2011 10:32:00 AM
ချစ်တက္ကစီ>>>ခန့်စည်သူ၊ ဇော်ဝမ်း၊ စိုးမြတ်နန္ဒာ
6/26/2011 08:46:00 AM
FEATURE: Glory days of Myanmar soccer just not coming back
When Myanmar’s junta leader ordered the creation ofanew soccer league two years ago — apparently after ruling outabid for Manchester United — he harked back to the country’s glory days.
However, despiteasuccessful start, the nation’s Premier League is struggling to
6/26/2011 05:54:00 AM
မေမေသည်သာ >>> ဟိန်းဝေယံ၊ ပြေဇင်၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ မေသဉ္စာဦး၊ စိုးပြည့်သဇင်
6/25/2011 10:42:00 PM
ည၏ကမ္ပည်း >>> ပြေတီဦး၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ ချောရတနာ၊ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
6/25/2011 10:38:00 PM
Japan envoy to meet Suu Kyi, Myanmar government
Myanmar democracy icon Aung San Suu Kyi talks to reporters followingameeting with US Senator John McCain (not pictured), at her house in Yangon on June 2, 2011. -- PHOTO: AFP
TOKYO - JAPAN will sendasenior diplomat to Myanmar next week to meet pro-democracy leader Aung San Suu Kyi and hold talks with the government, the foreign ministry in Tokyo said on Friday. သစ်ထူးလွင်
6/25/2011 11:51:00 AM
ဂျပန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တွေ့ဆုံမည်
City Assembly Member
Secretary toaMember of the House of Representatives မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံက အဆင့်မြင့် သံတမန်တဦး ရှေ့သီတင်းပတ်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂျပန် ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတဦး ဖြစ်တဲ့ ဂျပန် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အောက်လွှတ်တော် အမတ် Makiko Kikuta ဟာ
6/25/2011 11:43:00 AM
Explosions rock three Myanmar cities
Residents said two people were wounded inablast which hitavehicle in Mandalay [Reuters]
Near simultaneous bomb explosions in three Myanmar cities have wounded at least two people, the government and residents say.
The first explosion destroyedacar and shattered windows near the main Zaygyo market in
6/25/2011 08:46:00 AM
ဇွန်လ (၁၆) ရက်နေ့က အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Monsoon ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ ဗီဒီယို
Exclusive Video: Monsoon Music Concert, Yangon- Part 1 To more Part 2
6/25/2011 06:57:00 AM
6/25/2011 06:38:00 AM
YANGON, Myanmar, June 24 (UPI) -- As bombs rocked three Myanmar cities,amember of Parliament warned against the country slipping into an "Arab spring."
The people of Myanmar should work together to prevent the same uprising as beset north African countries that could damage the interests of the nation, Shwe Mann, speaker of the Lower House of Myanmar's Parliament, said.
"As U.S. Senator John McCain said when he visited Burma, we have to make sure that the kind of unrest that has happened in the Middle
6/25/2011 06:30:00 AM
Australia minister to meet Suu Kyi, Myanmar govt
SYDNEY, June 24, 2011 (AFP) - - Australian Foreign Minister Kevin Rudd will visit Myanmar next week and meet democracy icon Aung San Suu Kyi,astatement said Friday, in the first such visit in nine years to the military-dominated country.
Rudd will also meet with members of the government at what he said wasa"critical juncture in Burma's
6/25/2011 06:13:00 AM
နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနဲ့ ပြင်ဦးလွင်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲ
မန္တလေးမြို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် ပျက်စီးသွားသည့် ကားအနီး စစ်ဆေးနေစဉ်။ ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၁။
မြန်မာအစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်၊ ဒုတိယမြို့တော် မန္တလေးနဲ့ ပြင်ဦးလွင်ခေါ် မေမြို့မှာ ဒီနေ့ နေ့ခင်းပိုင်းက မိနစ်ပိုင်းစီခြားပြီး ဗုံးတွေ ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီပေါက်ကွဲမှုတွေမှာ အသေအပျောက် မရှိခဲ့ပေမဲ့ မန္တလေးမြို့ ပေါက်ကွဲမှုမှာတော့ အထိအခိုက်တချို့ ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နေပြည်တော်က ဗုံးပေါက်ရာ နေရာမှာ လုံခြုံရေးတွေ ချထားပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဗုံးပေါက်ကွဲမှု အခြေအနေတွေကို
6/25/2011 05:42:00 AM
Series of bomb blasts hit Myanmar
YANGON, MYANMAR (BNO NEWS) -- A series of bomb explosions on Friday hit several major cities in Myanmar, injuring at least three people.
According to Mizzima news, three powerful bombs exploded within minutes of each other in the cities of Mandalay, Naypyitaw, and Maymyo. A
few hours later,asecond bomb explosion hit Mandalay.
6/25/2011 05:36:00 AM
စုန်ရေ၏စီးသံ >>>ဟိန်းဝေယံ ၊ စိုးပြည့်သဇင်၊ ရဲအောင်၊ မြတ်ကေသီအောင်
6/24/2011 10:54:00 AM
ကြာဖြူ >>> ပြေတီဦး ၊ သက်မွန်မြင့်
6/24/2011 10:17:00 AM
ဂျာနယ်များတွင် ဖော်ပြခွင့်မရသော တိုင်းရင်းသား ရေးရာ ဆောင်းပါး။
by May Thingyan Hein on Thursday, June 23, 2011 at 5:08am
တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေနှင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး
နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်တိုင်း ကျွန်မမှာ တူညီတဲ့ မေခွန်းတစ်ခုကို အမြဲ မေးလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ `တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအတွက် ဘယ်လို ရည်မှန်းချက်မျိုး ရှိပါသလဲ`ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြေတဲ့အဖြေနဲ့ သစ်ထူးလွင်
6/24/2011 09:02:00 AM
မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၃၂ နဲ့ ၃၃ လမ်းကြား၊ ၈၂ နဲ့ ၈၃ လမ်းကြားမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး ဆိုင်းဘုတ်ကို ဖြုတ်ပေးဖို့ မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးမှူးက ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ သစ်ထူးလွင်
6/23/2011 06:54:00 PM
တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှ အပစ်ရပ်မည်ဟု KIA ပြော
ရန်ပိုင် Thursday, 23 June 2011 18:45 အစိုးရထံမှ တရားဝင်ကမ်းလှမ်းချက် ရရှိမှသာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးမည်ဟု ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) က ပြောသည်။
ရပ်စဲရေးတွင် အစိုးရအဖွဲ့ထံမှ တရားဝင်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသာ
6/23/2011 06:47:00 PM
စိုးပြည့်သဇင် နှင့် လတ်တလော စိတ်ကြိုက်ဖက်ရှင်
ယခုတစ်ပတ် လတ်တလော စိတ်ကြိုက်ဖက်ရှင် ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပေးမည့်သူက အချိန်တိုအတွင်း အကယ်ဒမီ ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယို ဇာတ်ကားများ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးလျက်ရှိသူ သရုပ်ဆောင် သစ်ထူးလွင်
6/23/2011 06:35:00 PM
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်လွတ်မြောက်စဉ်မှစ၍ လှုပ်ရှားမှုများ
Daw Suu Birthday Handout
6/23/2011 08:38:00 AM
ချစ်တတ်လာပြီ - ဇော်ပိုင်+Lဆိုင်းဇီ